चीरना बाल के हो?
के तपाईं कहिल्यै विज्ञापन शैम्पू को सुंदरियों मा प्रशंसा शानदार चमकदार कपाल हेरेको? तपाईं यस बारे के लाग्छ? सायद तपाईंले यी मोडेल प्रकृति छन् लक गर्दछ भनेर निर्णय गरेका छौं। वास्तवमा, गोप्य यो छ: तिनीहरूले एक विशेष प्रक्रिया हो, भनिन्छ जो कपाल चीरना गर्न subjected किनभने तिनीहरूले groomed हेर। यो के हो? के चीरना कपाल सबै विवरण जान्न चाहनुहुन्छ गर्नेहरूका लागि, त्यहाँ विस्तृत वर्णन हो।
सबै को पहिलो, हामी सम्झनुपर्छ कसरी मानव बाल। "गुच्छे" स्थित यसको सतह मार्फत तथाकथित। यी भागहरु hairs को बाहिरी सतह पछि हो भने, यो नीरस र unkempt देखिन्छ। तर यो मूल्य गुच्छे उहाँले चमक गर्न सुरु र denser हुन्छ रूपमा कस ट्रंक विरुद्ध थिचिएको छ। यसलाई पछि यो कारण छ केश painting त्यहाँ विशेष रेलका आफ्नो सन्तृप्ति छ किनभने, चमकदार र थप docile र उनको कपाल मा फिट गर्न सजिलो बन्न क्षमता छ - एक समय को लागि धेरै सुन्दर हेर्न।
यो यस्तो laminating बाल स्पष्ट हुन्छ - प्रक्रिया पछि देख छ, उद्देश्य जो को प्रतिभा र घनत्व किसिमहरु प्राप्त छ। विशेष हालतमा कपाल को कवरेज प्रदान गर्दछ एक सुरक्षा फिलिम, संग हावा जकडन प्रदान गर्दछ जो। यस मामला मा, यो प्राकृतिक मइस्चराइजिंग र पोसिलो पदार्थ संग संतृप्त छ।
यो प्रक्रिया लागि हालतमा एक बेरंग रंग, हाइड्रोजन पेरोक्साइड र अमोनिया, प्राकृतिक सामाग्री बनेको छ जो मुक्त छ। पावलले मिशेल - यस क्षेत्रमा सबैभन्दा चिरपरिचित र उच्च गुणस्तरीय सुविधा अमेरिकी निर्माता को व्यावसायिक भाग हुने मानिन्छ। यी रचनाहरूको गहिरो कपाल संरचना मा penetrates कि गहुँ प्रोटिन आधारित छन्। एक विशेष लाभ औषधीय बिरुवाहरु को अर्क को सामग्री, हुन आफ्नो विकास र स्वास्थ्य योगदान मानिन्छ।
यस्तो सेवा सामान्यतया एक विशेष सैलून छ। हुनत समय को संरचना गुणस्तर र अनुपालन प्रविधिको सत्यता मा हदसम्म निर्भर छ व्यावसायिक laminating, केही हप्ता बाल मा रहनेछ। हालै, तर, यो घर मा एक ठूलो समस्या चीरना बाल छलफल छैन।
तपाईंको आफ्नै कपाल कसरी laminate गर्न?
कारण यो चीरना बाल महंगा छ र महंगा हेरविचार र पछि दोहोरिने प्रक्रिया आवश्यक भन्ने तथ्यलाई गर्न, निष्पक्ष सेक्स को केही उनको घर लिन प्रविधि मास्टर निर्णय गरेका छौं। किनभने धेरै आफु को लागि विशेषज्ञहरु गर्न recourse बिना एक पेशेवर तरिका ख्याल गर्न कसरी जान्न चाहनुहुन्छ त्यहाँ को लज्जित हुन केही छ।
के चीरना गाह्रो छैन, तर प्रक्रिया शुद्धता र केही सीप आवश्यक छ।
सफाई गहिरो कपाल लागि डिजाइन एक शैंपू खरीद।
तपाईं एक अर्ध-स्थायी रंग आवश्यक हुनेछ।
राम्रो कस्मेटिक पसल मा चीरना प्रक्रिया को लागि एक विशेष उपकरण किन्न।
ध्यान दिएर आफ्नो बाल, स्याम्पु धेरै पटक पैदा धुन।
hueing रंग संग संतृप्त जीवन्त रंग को प्रभाव लाई प्राप्त।
त्यसपछि प्रयोग एक मइस्चराइजिंग बाल मास्क (संरचना राखिएको हुनुपर्छ लगभग 20 मिनेट)। राम्ररी यसलाई कुल्ला र कपाल सुक्खामा।
अब निर्देशनहरू अनुसार आधारभूत संरचना लागू र यो चीरना कपाल 30 मिनेट को लागि आयोजित गरिन्छ कि निश्चित गर्नुहोस्। तपाईं एक प्लास्टिक टोपी र सुक्खा कपाल एउटा हेअर लगाउने गर्न सक्नुहुन्छ।
स्याम्पु नगरी वाहन बन्द कुल्ला।
स्वाभाविक आफ्नो बाल सुक्खा र निर्देशन अनुसार अर्को मास्क बनाउन।
राम्रो-groomed, चमकदार र चिल्लो किसिमहरु - अब Witzlaus केश ताराहरू भन्दा झन् खराब खोज्दैन।
अभ्यास मा यो विचार राख्न प्रयास गर्नुहोस्, र यो चीरना बाल आफ्नो शक्ति भित्र पूर्ण छ भन्ने देख्न हुनेछ।
धमाका जाने र कसरी सही छनौट गर्न
बाल समीक्षा र प्रक्रिया को सार को चीरना।
ससेज शिकार संग मटर सूप कसरी खाना पकाउनु
स्केच छवि: को लागि शुरुआती चरण निर्देशनहरूको द्वारा चरण। srisovat पेन्सिल चित्र रूपमा?
चिहीतमा: जर्जियामा चिकन बाट व्यञ्जनहरु
मानिस प्रेम को घोषणामा रूपमा? प्रिय प्रेम को सुन्दर शब्दहरू
घरमा वितरण कसरी लिने?
गर्मीमा कार्पाथियन्समा तपाईंको स्वास्थ्य, छुट्टिहरू सच्याउनुहोस्